"Dabcan Waan Jeclaan Lahaa Inaan Meel Kala Ciyaaro Cristiano Ronaldo" - Xiddig Barcelona Ah Oo Dabka Kusii Shiday Warar Suuqa Ku Jiray - Gool24.Net
Ka hor intii aanu xidhmin suuqii January, waxa Barcelona dul hoganayey daruugo hubanti la’aan iyo mugdi hadheeyey mustaqbalka ciyaaryahannada qaarkood, taas oo ka dhalatay khilaaf u dhexeeyey macallinkii hore ee shaqada laga caydhiyey, ciyaartoyga iyo kooxda, kaas oo ugu dambayn isugu soo biyo shubtay hadallo xanaf leh oo ay warbaahinta isku dhaafsadeen Lionel Messi iyo Eric Abidal.
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa xor u ah inuu iska tegi karo dhamaadka xili ciyaareedka, waxaana kooxaha la hadal hayo ka mid ah Manchester City iyo Juventus, iyadoo haddaba la samaynayo shaxaha macquulka ah iyo suurtogalnimada sida ay u ekaan doonto Juventus haddii uu Messi ku biiro.
Arrintaas oo taagan, waxa warbaahinta la hadlay kubbad-sameeyaha reer Croatia ee Ivan Rakitic oo hore u qirtay in uu bishii January ka tegi lahaa Barcelona haddii uu Ernesto Valverde sii ahaan lahaa tababaraha kooxda, waxaanu markan qirtay inuu aad u jeclaan lahaa inuu ku biiro Juventus oo uu ka garab ciyaaro Cristiano Ronaldo.
Rakitic oo u warramay brfootball, ayaa waxa la weydiiyey haddii uu jeclaan lahaa inuu Juventus kala ciyaaro Cristiano Ronaldo, waxaanu ku jawaabay: “Dabcan, waan jeclaan lahaa. Waa mid ka mid ah ciyaaryahannada ugu wanaagsan taariikhda, waad ku raaxaysanaysaa marka aad daawanayso isaga oo ciyaaraya, wax fiican ayaanu ka samaynayaa Juventus.”
Rakitic waxa kale oo wax laga weydiiyey Lionel Messi oo lix sannadood ay kasoo wada ciyaareen Barcelona, waxaana uu yidhi: “Layaab weeye marka aad ka garab ciyaarayso, waa mid qariib ah. Wax jira ciyaartooyo wanaagsan jiil kasta, laakiin waxa aan hubaa in uu isagu yahay ciyaartoygii ugu wanaagsanaa 15-kii sannadood ee u dambeeyey. Fikirkayga, waxay ila tahay inuu yahay laacibkii ugu fiicnaa abid, in aanu lix sannadood wada joognayn, waxay ahaayeen sannado cajiib ah.”
Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa isagana wax laga weydiiyey, waxaanu yidhi: “Waxa aan jeclaan lahaa inaan kooxdayda ku hayso, wayna caddahay. Isaga ayay tahay inuu go’aan ka gaadhow axa u fiican, waa saaxiib wanaagsan oo aan jecelahay inaan arko isaga oo faraxsan.”